Isi Adobe Flash Player
A naghị emelite Flash Player: ụzọ ise iji dozie nsogbu ahụ
A naghị ele Adobe Flash Player anya dị ka ngwa mgbatị kachasị mma, n'ihi na ọ nwere ọtụtụ nhụsianya na ndị mmepe nke ngwá ọrụ a na-agbalị imechi ọhụụ ọ bụla. Maka nke a, ọ dị mkpa iji melite Flash Player. Ma gịnị ma ọ bụrụ na mmelite nke Flash Player agaghị arụcha?
Flash Player anaghị arụ ọrụ n'ime ihe nchọgharị: isi ihe kpatara nsogbu ahụ
Otu n'ime ụdị plugins nchọgharị kachasị ewu ewu nke ọtụtụ ndị ọrụ bụ Adobe Flash Player. A na-eji nkwụnye a mee ihe na Flash-ọdịnaya na ihe nchọgharị, nke dị ugbu a ole na ole na Intaneti. Taa, anyị na-ele anya isi ihe ndị na-emetụta inoperability nke Flash Player.
Ụzọ iji dozie njehie ahụ "Ka ịlele, ịkwesịrị ịme kacha ọhụrụ nke Flash Player"
Adobe Flash Player bụ nsogbu dị nro ngwa mgbakwunye, nke achọrọ maka ndị nchọgharị iji gosipụta ọdịnaya ọdịnaya Flash. N'isiokwu a, anyị na-elebakwu anya na nsogbu ebe kama igosipụta ọdịnaya Flash na weebụsaịtị, ịhụ ozi ọjọọ ahụ "Ịkwesịrị ka ọ bụrụ na ị ga-ahụ Flash Player kachasị ọhụrụ."
Njehie na-ebido ngwa Adobe Flash Player: ihe kpatara nsogbu ahụ
Ndị ọrụ ndị ọzọ na ndị ọzọ malitere ịbịakwute nsogbu n'oge ntinye nke Flash Player na kọmputa. Karịsịa, taa, anyị ga-atụle ihe na-akpata na ụzọ isi kpochapụ njehie mbụ nke ngwa Adobe Flash Player. Njehie na-ebido ngwa Adobe Flash Player, dịka iwu, na-eme n'etiti ọrụ Mozilla Firefox, ndị ọrụ Opera na-ezute ya oge na-adịghị.
Esi wepu Adobe Flash Player site na komputa
Adobe Flash Player bụ ọkpụkpọ pụrụ iche nke achọrọ maka nchọgharị gị arụnyere na kọmputa gị iji gosipụta ọdịnaya ọdịnaya Flash dị iche iche na saịtị dị iche iche. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eji nkwụnye a enwe nsogbu ọ bụla ma ọ bụ na ịnweghịzi ya mkpa, ị ga-achọ ịrụ ọrụ mmezipụ zuru ezu.
Mmekọrịta njikọ mgbe ị na-etinye Flash Player: ihe kpatara na ngwọta
Flash Player bụ onye ọkpụkpọ mgbasa ozi a ma ama nke ọrụ ya na-eji egwuri egwu ọdịnaya dị iche iche nchọgharị. Isiokwu a ga-atụle ọnọdụ mgbe, mgbe ị na-agbalị ịnwụnye Adobe Flash Player, ozi nhụhiere njikọ gosipụtara na ihuenyo. Njehie njikọ mgbe ị na-akwunye Adobe Flash Player na-egosi na usoro ahụ enweghị ike ijikọta sava Adobe na ibudata nsonaazụ achọrọ nke software ahụ na kọmputa.
Ọ bụghị ihe nzuzo na Adobe Flash Player abụghị ihe a pụrụ ịtụkwasị obi ma bụrụ ihe mgbakwunye. Ya mere, mgbe gị na ya na-arụ ọrụ, ị nwere ike izute ọtụtụ nsogbu. Anyị ga-anwa ileba anya na-emekarị ihe na-emekarị ma chọpụta otú e si edozi ha. Erwe nrụnye Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu n'oge arụmọrụ Flash Player, ọ ga-abụ na ị nwere faịlụ Adobe Flash Player ọ bụla fọdụrụ na kọmputa gị.
Esi chọpụta ụdị Adobe Flash Player
Akụkụ nke atọ, otu n'ime ha bụ Adobe Flash Player, dị mkpa maka ọrụ ziri ezi nke ihe nchọgharị weebụ. Ọkpụkpọ a na-enye gị ohere ile vidiyo ma kpọọ egwuregwu flash. Dị ka ngwanrọ niile, ọ ga-adị mkpa ka emelite Flash Player oge niile. Ma maka nke a, ị ga-achọ ịma ụdị nke arụnyere na kọmputa gị ma ọ dị mkpa imelite.
Ihe Adobe Flash Player anaghị amalite na akpaghị aka.
Flash Player bụ software a ma ama na arụ ọrụ na kọmputa ọtụtụ ndị ọrụ. A chọrọ ngwa a iji kpọọ Flash-ọdịnaya na ihe nchọgharị, nke jupụtara na Internet taa. O di nwute, onye ọkpọ a enweghi nsogbu, ya mere taa anyi ga-ele anya ihe mere Flash Player amaliteghi na akpaaka.
Otu esi wepu bọtịnụ "Pịa iji malite Adobe Flash Player"
Eleghị anya, ọtụtụ ndị nwere nsogbu mgbe ozi "Pịa ịmepe Adobe Flash Player" na-eti mkpu tupu ị lee vidiyo. Nke a anaghị egbochi ọtụtụ, mana ka anyị tụlee otú e si ewepụ ozi a, karịsịa ebe ọ bụ na ọ dị mfe ime. Ozi yiri nke ahụ na-egosi n'ihi na nchịkọta ihe nchọgharị ahụ, enwere akara "Nbanye plugins na arịrịọ", nke n'aka otu na-azọpụta okporo ụzọ, na nke ọzọ, ọ na-ewe oge ọrụ.
Esi melite Adobe Flash Player
Adobe Flash Player bụ ngwa mgbakwunye mara ọtụtụ ndị ọrụ, nke a chọrọ iji gosipụta ọdịnaya ọkụ dị iche iche na weebụsaịtị. Iji hụ na arụmọrụ dị elu nke nkwụnye ahụ, nakwa iji belata ihe ize ndụ nke imebi nchekwa nke kọmputa ahụ, a ghaghị imelite nkwụnye ahụ na oge ya. Ihe Flash Player ngwa mgbakwunye bụ otu n'ime plugins kachasị emetụ na ọtụtụ ndị na-eme nchọgharị na-achọ ịda mbà n'ọdịnihu.
Imelite na ngwanrọ dịgasị iche iche na-apụta mgbe mgbe na ọ bụghị mgbe nile ka ọ ga-ekwe omume ịdebe ha. Ọ bụ n'ihi na nsụgharị nke ngwanrọ na ọ nwere ike ịchọpụta na Adobe Flash Player na-egbochi. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya iji mepee Flash Player. Na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala Ọ nwere ike ịbụ na nsogbu ahụ na Flash Player si n'eziokwu ahụ bụ na ngwaọrụ gị nwere ihe ọkpụkpọ ma ọ bụ ọkwọ ụgbọala vidio.
Esi eji dochie Adobe Flash Player
Adobe Flash Player, n'ezie, bụ onye na-ahụ maka ya na ọ na-esiri ike ịchọta onye kwesịrị ekwesị maka ya, nke ga-eme nke ọma na ọrụ niile Flash Player na-arụ. Mana ka anyi gbaliri ichoputa ihe ozo. Silverlight Microsoft Silverlight Microsoft bụ ngosipụ cross-nchọgharị na nke ị nwere ike ịmepụta ngwa Ịntanetị mmekọrịta, mmemme maka PC, ngwaọrụ mkpanaka.
N'agbanyeghị na HTML5 nkà na ụzụ na-agbalị ịmanye si Flash, onye nke abụọ ka na-achọ na ọtụtụ saịtị, nke pụtara na ndị ọrụ chọrọ Flash Player arụnyere na kọmputa ha. Taa, anyị ga-ekwu banyere ịmepụta ọkpụkpọ mgbasa ozi a. A na-achọkarị ịtọlite ​​Flash Player n'ọtụtụ ọnọdụ: mgbe ị na-edozi nsogbu na nkwụnye, maka ịrụ ọrụ nke ọma (ngwa kamera na igwe okwu), yana maka ntanetịime nkwụnye maka ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche.
Kedu ihe Adobe Flash Player maka?
N'ezie, ị nụla ụdị ọkpọ dị ka Adobe Flash Player, echiche nke nke a bụ ihe na-enweghị isi: ụfọdụ ndị na-eche na nke a bụ otu n'ime ngwanrọ kachasị mkpa a ga-arụnyere na kọmpụta ọ bụla, ebe ndị ọzọ na-ekwu na Flash Player bụ ihe na-enweghị nchebe. Taa, anyị ga-elebakwuo ihe mere i ji chọọ Adobe Flash Player.
Egwuregwu Flash Player na - enweta: ebe nchekwa dị na otu esi esi "wepụ" faịlụ site na ya
Flash Player bụ ihe egwuregwu Flash na-ewu ewu site na ihe nchọgharị weebụ, nke ị nwere ike ịlele vidio weebụ, gee egwu, na ndị ọzọ. A na-ebudata ozi na-enye site na Flash Player ma chekwaa na kọmputa, nke pụtara na na tiori ha nwere ike "dọpụ". A na-echekwa vidiyo ndị a na-ekiri site na Flash Player na nchekwa usoro, Otú ọ dị, ị pụghị ịdọpụ ha n'ebe ahụ n'ihi nzabe setịpụrụ na ihe nchọgharị gị.
Otu esi enyere Adobe Flash Player aka na ihe nchọgharị
Na-arụ ọrụ n'Intanet na ihe nchọgharị ọ bụla, onye ọrụ ahụ na-atụ anya na ọdịnaya nile nke ibe weebụ ga-egosipụta n'ụzọ ziri ezi. N'ụzọ dị mwute, na ndabara, ihe nchọgharị ahụ agaghị enwe ike igosipụta ọdịnaya niile n'enweghị ntinye pụrụ iche. Karịsịa, taa anyị ga-ekwu banyere otu esi arụ ọrụ nke plugin Adobe Flash Player.
Adobe Flash Player bụ ọkpụkpọ a ma ama nke ụwa nke dị mkpa iji kpoo ọkụ na ọdịnaya dị iche iche na weebụ. Ọ bụrụ na nkwụnye a na-efu na kọmputa ahụ, ọ pụtara na ọtụtụ egwuregwu-egwu, ihe ndekọ vidiyo, ihe ndekọ ọdịyo, ọkọlọtọ mmekọrịta bụ nanị agaghị egosipụta na ihe nchọgharị ahụ.
Adobe Flash Player ngwa mgbakwunye bụ ngwá ọrụ dị mkpa maka ndị nchọgharị iji nwee ike igwu ọdịnaya Flash: egwuregwu n'ịntanetị, vidiyo, ihe ndekọ ihe na ihe ndị ọzọ. Taa, anyị na-elele otu n'ime nsogbu kachasị emetụta nke anaghị etinye Flash Player na kọmputa gị. Enwere ọtụtụ ihe mere eji etinyeghị Flash Player na kọmputa.
https://termotools.com ig.termotools.com © Adobe Flash Player 2020